थाइल्याण्डका राजाको सुरक्षामा कति सुरक्षाकर्मी ? – मुलधार न्युज
Home > समाचार > थाइल्याण्डका राजाको सुरक्षामा कति सुरक्षाकर्मी ?
थाइल्याण्डका राजाको सुरक्षामा कति सुरक्षाकर्मी ?
२० आश्विन २०७५, शनिबार १५:३४
काठमाडौँ –थाइल्याण्डका राजा र उनको परिवारका लागि झण्डै एक हजार ६०० सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । राजा महा भाजिरालोङकोर्न र उनको परिवारका लागि यति ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरु खटाइएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ ।
थाइल्याण्डको राजसंस्थालाई उच्च सम्मानकासाथ हेरिन्छ भने त्यही अनुसारको सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ । थाइल्याण्डका जनताले अति आदर गर्ने तत्कालिन नरेश भूमिबोलको निधन भएपछि अहिले उनका छोरा राजा बनेका छन । स्वघोषित विषेश सेवा विभाग नवनियुक्त प्रमुख तोर्साक सुक्भीमोलले दिएको जानकारी अनुसार हालै मात्र ४०० सुरक्षाकर्मीहरु थपिएका छन् ।
थपिएका सुरक्षाकर्मीहरु अपराध नियन्त्रण विभागबाट ल्याइएको उनले जानकारी गराए । उनीहरुलाई शाही परिवारको सुरक्षा र संस्कारका बारेमा पनि प्रशिक्षित गरिएको छ । “अहिले थपिएका सहित गरेर कुल सुरक्षाकर्मीहरुको संख्या एक हजार ६१७ पुगेको छ” तोर्साकले जनाए । उनीहरुले करिब पाँच बर्ष त्यहाँ सेवा गर्ने बताइएको छ ।
शाही सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई दश उप विभागमा विभाजन गरेर जिम्मेबारी दिइएको छ । एजेन्सी
गुल्ममा नाम परिवर्तन गर्दै सशस्त्र प्रहरी